Ụlọ ọrụ Tin Box Square na Rectangular, Ndị na-ebunye - China Square na Rectangular Tin Box Ndị na-emepụta igbe.
[Ụdị]: Square, akụkụ anọ, gburugburu na oge mgbe, wdg.
[Ojiji]: nri, onyinye, kemikal.wdg.
[Ihe onwunwe]: A-klas tinplate, nri-ọkwa ma ọ bụ SGS kwadoro.
[Ọkpụrụkpụ]: 0.21 ~ 0.35mm dabere na nha ma ọ bụ ihe ndị ahịa chọrọ.
Mpempe akwụkwọ CD, Nkata Nchekwa igwe nwere mkpuchi, Igbe Tin Tii, Tin ịchọ mma akpa, Igbe Tin ahaziri ahazi, Okwu cd efu,